Cwangcisa ividiyo njengephepha lodonga Windows 7 | Iindaba zeGajethi
Ungayiseta njani ividiyo njengephepha lodonga kwiWindows 7
Beka ividiyo njengephepha lodonga kwiWindows 7 desktop? Lo ingangomnye wemisebenzi enzima ukuyenza, nangona abo balandele imbali yeenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza eziphakanyiswe nguMicrosoft, ayizukuba yinto entsha.
Inyani yile kwi IWindows Vista iMicrosoft yeza nomsebenzi onomdla oko kwakuthandwa ngabantu abaninzi, ngokufana negama I-DreamScene inike ithuba lokubeka ividiyo nayiphi na iphepha lodonga kwidesktop; Ngelishwa iMicrosoft ithathe isigqibo sokususa eli nqaku kwiinguqulelo zamva nje, ithathela ingqalelo ukuba iphule uzinzo kunye nemisebenzi yenkqubo yokusebenza. Ngokufanelekileyo, kukho isixhobo esincinci esinokusisebenzisa kwiWindows 7, engadliyo ngokutya isixa esikhulu semithombo yenkqubo.
1 Khuphela kwaye usebenzise i-DreamScene Windows 7
2 Yenza indawo yokubuyisela kwiWindows 7
3 Imvume yomlawuli nge-DreamScene
4 Dlala ividiyo nge-DreamScene yenziwe
Khuphela kwaye usebenzise i-DreamScene Windows 7
I-DreamScene sisixhobo esincinci onakho khuphela kwikhonkco elilandelayo, ngethamsanqa kwabaninzi, ayifuni ukufakwa kodwa kunokuba yenziwe. Kungenxa yokuba isixhobo siyaphatheka, oko kuthetha ukuba singasiqhuba nokuba sikwi-USB. Kukho amaqhinga athile ekufuneka siwamilisele ukuze sifezekise iinjongo zethu, into esiza kuyikhankanya apha ngezantsi ukunqanda naluphi na uhlobo lomonakalo kwinkqubo yokusebenza kunye nokudideka xa udlala ividiyo kwiWindows 7 iphepha lodonga.
Yenza indawo yokubuyisela kwiWindows 7
Isixhobo esibizwa ngokuba yi-DreamScene siyaphatheka, esixhomekeke kwimiyalelo ethile eya kuguqula iRegistry yeWindows 7; ngenxa yesi sizathu, kubalulekile ukwenza Inkqubo yokubuyisela indawo yokusebenza ukuba kwenzeka into eza kuyizinzisa; I-DreamScene inokuyiqhuba kuzo zombini iinguqulelo zaseKhaya, inguqulelo yobungcali kunye nohlobo lokugqibela ngokutsho komphuhlisi wayo, nangona okwangoku singakhange siqiniseke ukuba iyasebenza kwiWindows 8.1 kuba khange sikwazi ukuvavanya isixhobo kuloo nguqulo.
Imvume yomlawuli nge-DreamScene
Into yesibini ekufuneka ithathelwe ingqalelo yile I-DreamScene ayenzi "ngokucofa kabini" okulula, okoko utshintsho oluza kwenziwa kwi "Windows 7 Registry" lubuyela umva; Ngesi sizathu, nje ukuba uyityhile i-DreamScene ephumezayo kuya kufuneka uyikhethe ngeqhosha lasekunene le mouse kwaye yiqhube "nemvume yomlawuli". Iwindow encinci iya kuvela kwangoko, eneendlela ezimbini kuphela onokukhetha kuzo, ezi zezi:
Nika amandla i-DreamScene
Inketho yokuqala iya kwenza inqaku, "Ukuqhwanyaza" okuncinci (okudanyazayo) kwesikrini kunokuqatshelwa. Xa uvula eli nqaku ngelinye iqhosha, uya kuba nakho ukuncoma isiphumo esifanayo, nangona naluphi na utshintsho olwenziwe kwi "Windows 7 Registry" luza kubuyiselwa esiqhelweni.
Dlala ividiyo nge-DreamScene yenziwe
Ukuba ukhomba isikhombisi semouse kwindawo engenanto kwiWindows 7 desktop kwaye ucofe ekunene, uyakuqaphela oko Umsebenzi omtsha udityaniswe kwimenyu yokuma, ebhekisa kule DreamScene.
Okwangoku, i-DreamScene iya kuvela ngaphandle kokukhetha ukuba ikhethwe, kufuneka yamkele ngeli xesha iqhinga elincinci esilicebisayo ngezantsi:
Kuya kufuneka uvule iWindows Explorer.
Yiya kwindawo apho unevidiyo kwifomathi ye-MPEG okanye ye-AVI.
Khetha le vidiyo ngeqhosha lasekunene le mouse.
Ukusuka kwimenyu yokuma, khetha «Seta njenge-Desktop Bakcground«.
Emva kokuba wenze inyathelo lokugqibela, unokuyithanda ngoko nangoko ividiyo iya kuvela njengephepha lodonga kwidesktop yeWindows 7; Ukuba ukhethe imuvi epheleleyo, iya kudlala ukusuka ekuqaleni kuye esiphelweni, nangona ngaphandle kwesandi.
Ukuba ucofa iqhosha le mouse lasekunene kwidesktop kwakhona (kunye nokudlala imovie) ungayithanda loo nto I-DreamScene ikuvumela ukuba unqumame ividiyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, le yeyona nto ibalaseleyo esinokuthi sibenayo ukuba mzuzu othile sifuna ukuba noopopayi okanye ividiyo yalo naluphi na uhlobo njengephepha lodonga Windows 7.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ungayiseta njani ividiyo njengephepha lodonga kwiWindows 7
Uyifumana njani kwakhona iWMP player player kwiWindows 7
Lawula iWindows DUAL Boot ngamanyathelo ambalwa